अटाे 🚙 Archives - Safal Awaj Safal Awaj
आहा ! रारा गोल्डकपका उत्कृष्ट खेलाडी राजाबाबुलाई स्कूटर
पोखरा, १३ वैशाख । आहा ! रारा गोल्डकपका उत्कृष्ट खेलाडी राजाबाबु थापालाई स्कूटर हस्तान्तरण गरिएको छ । सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा भएको १९ औं संस्करणको आहा ! रारा गोल्डकपका उत्कृष्ट खेलाडी उनलाई सोमबार अप्रिला स्कूटर हस्तान्तरण गरिएको हो । उपाधि विजेता टोली संकटाका गोलरक्षक समेत रहेका राजाबावुलाई पोखरामा अप्रिलाका अधिकृत बिक्रेता सिताज लाइफ स्टाइलका प्रबन्ध निर्देशक अनुजकुमार बास्तोलाले स्कूटर हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापा, पूर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली, प्रथम उपाध्यक्ष हरिराम गुरुङ (सुरज) लगायतको उपस्थिति थियो । साे स्कूटर… पुरा पढौ
सातै प्रदेशमा ५० चार्जिङ स्टेशन : एडिबिले ३७ करोड ७९ लाख लगानी गर्दै
काठमाडौं, २ वैशाख । एशियाली विकास बैंकको ३७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लगानीमा देशका ७ वटै प्रदेशका ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न लागिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूमा चार्जिङका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणले चाईनिज कम्पनी वानव्याङ डिजिटल इनर्जीसंग ठेक्का सम्झौता गरेकाे छ । प्राधकिरणका अनुसार देशमा विद्युत उत्पादनको परिमाण बढ्न लागेको र सरकारले विद्युतीय सवारी साधन चलाउनका लागि प्रोत्साहन गरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाईनिज कम्पनीसंग चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि सम्झौता गरेको हो । चार्जिङ स्टेशन प्रदेश… पुरा पढौ
उपत्यकामा थप पाँच स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिने
काठमाडौं, ३१ चैत । सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि आगामी असार मसान्तसम्ममा थप पाँच स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकाको जडीबुटी, कोटेश्वर, थापाथली, दरबारमार्ग र केशरमहलमा बत्ती जडान गरिने विभागले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका बढी सवारी चाप र यात्रुले सडक पार गर्ने स्थान छनोट गरी बत्ती जडान भइरहेको विभागले जनाएको छ । पाँच चोकमा र त्यहाँका आठ जेब्राक्रसिङमा जडान गरिने सवारी व्यवस्थापन तथा ट्राफिक शाखाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले जानकारी दिए ।… पुरा पढौ
काठमाडौं, ३० चैत । नेपालको राष्ट्रिय बसपार्कका रुपमा रहेको गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर आगामी बुधबारदेखि बन्द हुने भएका छन् । बसपार्कका टिकट काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टरमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हाल सञ्चालन हुँदै आएका काउण्टर वैशाख १ गते देखि केही समयका लागि बन्द हुने भएका हुन् । नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले बसपार्कका काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट सञ्चालन गर्नका लागि टिकट काउण्टर केही दिनका लागि बन्द गर्न लागेको जानकारी दिए ।… पुरा पढौ
नयाँ वर्ष लक्षित गर्दै बेनेलीले सार्वजनिक गर्यो पावरफुल बाइक ‘७५२ एस’
काठमाडौं, २८ चैत । बेनेली मोटरसाइकल नेपालको बजारमा निकै लोकप्रिय भएको छ । त्यसैले पनि होला नयाँ वर्ष २०७८ लाई लक्षित गरेर मोटरसाइकलका पारखिको लागि नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक भएको छ । इन्ट्री लेवल कार भन्दा शक्तिशाली इन्जिन भएको नयाँ डिजाइनको मोटरसाइकल '७५२ एस' लाई नेपाली बजारमा बिक्रीमा ल्याईएको हो ।नेपालको बजारमा यसको मूल्य २५ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आधिकारीक बिक्रेता केटीएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङले बेनेली '७५२ एस' लाई नेपाली मोटरसाइकल राइडरहरुबीच सार्वजनिक गरेको हो । बेनेली मोटरसाइकल कम्पनी… पुरा पढौ
पोखरा, १८ चैत । पोखराको सार्वजनिक सडकमा महानगरले पार्किङ शुल्क उठाउन थालेपछि विभिन्न गुनासो आइरहेका छन् । यतिसम्म कि शोरुममा राखिएका गाडीको समेत शुल्क नछाडेपछि व्यवसायीहरु गुनासोसहित महानगर पुगेका छन् । पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (वाडा) का अध्यक्ष मोहनबाबु खड्का सहितको टोलीले बुधबार मेयर मानबहादुर जिसीलाई भेटेर शोरुममा राखिएका र नम्बर प्लेट नभएका नयाँ गाडीको पार्किङ नलिन आग्रह गरे । वाडाको आग्रहमा मेयर जिसीले बिक्रीका लागि शोरुम तथा पसल अगाडि प्रदर्शनीमा सजाएर राखिएका गाडीको पार्किङ शुल्क नलाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे… पुरा पढौ
एक सय युनिट बिक्रीसंगै हस्कभर्ना मोटरसाइकलको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं, १४ चैत । हस्कभर्ना मोटरसाइकल नेपाली बजारमा आएको केहि समयमै एक सय युनिट बढी बिक्री भएको छ । दशैंमा सार्वजनिक गरिएको हस्कभर्नाप्रति ग्राहकको रुचि बढेको आधिकारीक बिक्रेता हंशराज हुलास प्राइभेट लिमिटेडले जनाएको छ । अहिले स्भार्टपिलेन २५० तथा भिटपिलेन २५० गोल्छा समूह अन्तर्गत रहेको केटिएम सोरुमबाट बिक्री हुँदै आएको छ । हस्कभर्ना एक सय बढी युनिट बिक्री भएपछि यसको मूल्यमा पनि बृद्धि भएको छ । स्भार्टपिलेन २५० र भिटपिलेन २५० को मूल्य बढाईएको हो । पछिल्लो सार्वजनिक गरिएको मूल्य… पुरा पढौ
डिएफएसके ग्लोरी आई-अटो सार्वजनिक, कति छ मूल्य ?
काठमाडौं, ११ चैत । कुजु नेपाल प्रालिले डिएफएसके तेश्रो मोडलको ग्लोरी आई-अटो आज सार्वजनिक गरेको छ । डिएफएसकेको आधिकारीक बिक्रेता कुजु नेपालले सार्वजनिक गरेको तेश्रो मोडलको ग्लोरी आई अटोको मूल्य ८९ लाख ५० हजार रहेको छ । यसअघि ग्लोरी सिरीजका ५६० तथा ५८० एसयूभी गाडी बिक्री हुँदै आएका थिए । पछिल्लो यो थप भएको तेश्रो मोडलको ग्लोरी आई-अटो हो । डिएफएसके गाडीमा सात सिट रहेका छन् । यो आई अटो इन्टेलीजेन्ट एसयूभी भएको बताईएको छ । गाडीमा आईटक नामक एस… पुरा पढौ
काठमाडौं, १० चैत । यातायात व्यवस्था विभागले झण्डै दुई लाख ५० हजार चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको छ । अनुमतिपत्रका लागि लिइएको परीक्षा पास गरेका र नवीकरण गरेका सहितका लागी उक्त सङ्ख्यामा अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने भएको हो । देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट एकै पटक धेरै सङ्ख्यामा नयाँ अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएकाले यो सङ्ख्या अहिले ह्वात्तै बढेको विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोलले बताए। विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी जारी गरेसँगै यातायात कार्यालयहरुले सेवा दिएका थिएनन् । गत असारमा… पुरा पढौ
अब नेपालमै बन्ने भए बजाज मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा
काठमाडौं, १० चैत । हंशराज हुलास प्रालिले अब देशमै बजाज मोटरसाइकलका पार्टपूर्जाको उत्पादन गर्ने भएको छ । अब छिट्टै दक्ष प्राविधिकहरु ल्याएर बजाज मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा उतपादनको तयारी गर्न लागेको बताईएको छ । नेपालको ठूलो व्यावसायीक घराना गोल्छा ग्रुप न्तर्गत रहेको हंशराज हुलास प्रालिले नेपालमै बजाज मोटरसाइकलका पार्टपूर्जा बनाउने गृहकार्यमा लागेपछि यसलाई निकै महत्वकासाथ हेरिएको छ । गोल्छा ग्रुपले नेपालमा अहिले बजाज मोटरसाइकलको एसेम्बल गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार हाल बाहिरबाट पार्टपूर्जा ल्याएर एसेम्बल गर्ने काम भईरहेको छ । तर… पुरा पढौ
खानेपानीकाे महत्वाकांक्षी आयोजना: पाेखरेलीले पिउनेछन्, सिधैं धाराको पानी
पोखराबाट उदाएको नेपालकै अग्रणी ‘पोखरा फाइनान्स’